Anthropocene, mmadu okwesiri "inwe" ala nke aka ya? | Netwọk Mgbasa Ozi
David melguizo | | Nkewa, Ihe gbasara ihu igwe
Mmetụta ọkụ site na mbara igwe
Ruo ọtụtụ afọ, a na-arụrịta ụka ma ụmụ mmadụ dị mkpa n'onwe anyị iji ruo ogo oge ọmụmụ anyị. Nnukwu mmetụta nke ihe a kpọrọ mmadụ nwere na mbara ala na gburugburu ya na-akpata mkpochapụ na ọbụna ịgbanwe usoro okike na nke ihu igwe eme ka ọ na-amụ iji tinye oku na-aga Anthropocene na mbara ala ụwa.
Kemgbe afọ 2009 otu ndị sayensị n ’mba ụwa na - amụ banyere iwebata echiche ọhụrụ a na ebe aga - amalite mmalite oge a. A akụkọ ugbu a na-akwadebe na a ga-adade ka Uniontù Mba Nile nke Sayensị Nkà Mmụta Ihe na 2016. Ahụ a bụ naanị ahụ tozuru oke maka ikpebi afọ nke ụwa.
Ruo mgbe a kpebiri ma ọ ga-ewebata mgbanwe a, anyị ga-anọgide na-ebi na Holocene, oge nke bidoro ihe dịka afọ 12000 gara aga mgbe oge ikpeazụ nke glaciations. Ọnọdụ ihu igwe nke oge a bụ ihe mere ka ụmụ mmadụ nwee ọganihu na ngwa ngwa ọ mere, na ọganihu ahụ na mmetụta ọ na-enwe n'ụwa ebe anyị bi bụ ihe mere anyị ji malite iche echiche na ntinye nke a oge ọhụụ metụtara ụmụ mmadụ.
Otu n’ime isi ihe na nke a na-emekwu mkparịta ụka na ya bụ ikpebi mgbe ụwa ọhụrụ a malitere. Isi ihe abụọ a chọrọ mmalite nke afọ nuklia n’etiti narị afọ nke iri abụọ na bọmbụ nke Hioshima na Nagasaki ma mesịa nwee ihe ọghọm dịka Chernobyl ma ọ bụ ụlọ ọrụ ike Fukushima nke hapụrụ ihe nrịbama radieshon ma na mmadụ na oke osimiri na mmiri. N'aka nke ọzọ, ndị mmalite nke mgbanwe ụlọ ọrụl na narị afọ nke iri na asaa ma ọ bụ ọbụna ntoputa nke ugbo ihe dịka afọ 10000 gara aga.
Ebumnuche nke echiche dị iche iche wepụtara iji chọta mmalite nke oge ọhụrụ ala a metụtara ọdịdị ya na sedimentary ndekọ. Ka anyị chee banyere ọkà mmụta banyere ala na 10000-20000 afọ, ọ ga-ahụ ụfọdụ njirimara dị iche na strata metụtara oge iji nwee ike ịmata ya dịka oge nke ala nke aka ya
Na-echebara ogige ndị a echiche, metụtara mmalite nke oge a na ọdịdị nke ọrụ ugbo bụ n'ihi eziokwu ahụ bụ na ọ bụ mgbe mmadụ bidoro imeghari ala ahụ na ya ma ghara imegharị ya na mbara ala. Mmeghari nke nsị nke mmadụ meworo kemgbe oge a nwere ike imeri nke kpatara ụdị ụdị okike ọ bụla, na-akwadebe ala maka ịkọ ihe, yana iji okwute mee ihe, na mgbe emechara ụlọ ọrụ na ihe eji eme ihe nke ihe ala.
N'aka nke ọzọ, ịtụle mbido mgbanwe ụlọ ọrụ mmepụta ihe dị ka mmalite nke oge ọhụrụ a abụrụla mbido nke oge a, na-arụ ụka na mbido ojiji nke mmanụ ọkụ (kol, mmanụ, wdg) yana ihe ndị ha na-agbakọ wụsara n'ime ikuku ga-apụta dị ka akụkụ nke njirimara stratum. N'otu oge ahụ, iji mbara ala eme ihe n'ụzọ sara mbara karị na ịkpa okwute na igwupụta akụ́kụ́ karị ga-abụkwa ihe ọzọ a ga-atụle.
N'ọnọdụ ọ bụla, atụmatụ abụọ a fọrọ nke nta ka ọ ghara ịchị, ebe ọ bụ na ọ bụ ezie na mmetụta dị na sedimenti ahụ ga-aba ụba, ọ gaghị emetụta ụwa dum, n'agbanyeghị nke ahụ, ọ dị n'aka International Union of Geological Sciences iji chọpụta ma hà dị mkpa ma ọ bụ na ha abụghị. ụbọchị ndị a.
Nhọrọ kachasị mma, na ikekwe onye nwere ohere kachasị mma nke ịhọrọ, mgbe niile ma ọ bụrụ na a nabatara iwebata ọhụụ ọhụrụ a na akụkọ ihe mere eme, bụ mmalite nke oge nuklia ma ọ bụ atọm. Ma ule nuklia ma ihe ọghọm nke sitere na ụlọ ọrụ ike nuklia pụtara nke ahụ ihe omuma redio di n'elu uwa dum ma ọ bụrụ na a ga-edebe ha na ala, mmiri na ikuku ruo ọtụtụ afọ, ndọtị nke ụdị ihe ndị a zuru ezu ka a ga-ewere dị ka ndọtị ụwa.
Onye nkwalite nke nkwupụta ikpeazụ a, Jan Zalasiewicz, ọkà mmụta sayensị si Mahadum nke Leicester na-ekwusi ike na na mgbakwunye na mmetụta nuklia enwere ihe ndị ọzọ dịka mmetụta nke mmadụ na teknụzụ ya yana ọdịdị nke ihe dịka plastik ma ọ bụ aluminom ma ọ bụ ịta ahụhụ nke CO2 na mbara igwe na acidification nke oké osimiri na-eduga anyị n'ikwu okwu banyere "Nnukwu Ọsọ ọsọ" nke ga-eru eru maka "nsọpụrụ" a.
Ihe niile dị n'aka nke nje nke ga-ahụ maka ọrụ na 2016 iji nyochaa isi ihe ndị a niile ma chọpụta ma mmadụ ọ kwesịrị inwe oge ala naanị ya na ihe ga-abụ mbido ya, ma ọ bụ ma ọ bụrụ na ọ bụghị, dịka ha chere akụkụ ọzọ dị ukwuu nke ndị ọkà mmụta sayensị "anyị chọrọ inye onwe anyị mkpa karịa ka anyị nwere n'ezie."
Ozi ndi ozo: Warwa na-enweghị ike ịgbagha agbagha ga-ebuli oke osimiri karịa otu mita; Thewa ọ bụla gụchara oyi?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Nkewa » Anthropocene, mmadu okwesiri "ikwe" oge nke ala nke aka ya?